Iesmụ nwanyị na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ nwere akwa abụọ
Kpochapụwo ụdị, Mere nke adụ na inogide ethiopia atụrụ akpụkpọ anụ, na cashmere lining, Na azụ yi uwe na abụọ stitches, Ọ dị ka mfe ma na-atọ ụtọ.na-enye ezigbo obi na-adị ọtụtụ oge si ukporo ka uwe!
Ladies atụrụ akpụkpọ anụ uwe na ụta
Life style, Mere nke adụ na inogide ethiopia atụrụ akpụkpọ, na silk lining, Na azụ yi uwe na ụta, dị ka ibi na okike .Ihe silk lining na-enye ezigbo obi gị aka, Nice na-eyi maka ọtụtụ oge!
Iesmụ nwanyị ojii atụrụ akpụkpọ anụ uwe na cognac cuff
Okomoko na aka nkecha, nke paihuang atụrụ akpụkpọ anụ, yana cashmere lining, The larịị, ọgaranya udidi nke akpụkpọ anụ, ndị ọhụrụ ejiji na kasị nkà ịrụ. zuru okè Nchikota! Kacha mma na-eyi nke fanshion paty!
Okomoko na aka nkecha, nke paihuang atụrụ akpụkpọ anụ, yana cashmere lining, The larịị, ọgaranya udidi nke akpụkpọ anụ, ndị ọhụrụ ejiji na kasị nkà ịrụ. zuru okè Nchikota! Cognac cuff na 3-akara kpachie na azụ, na-egosi ihe ọhụrụ na anya- ntukwasi. Ọ bụ ihe kacha mma na-eyi maka fanshion paty!
Iesmụ nwanyị na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ na-enweghị uwe
Ejiri akpụkpọ anụ dị nro ma na-agbatị, ejiri mara oghere mee mkpịsị aka, eriri aka ya na mmechi Viscose. Na-adaba adaba iji. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nwere akpụkpọ ụkwụ na azụ ikuku na-enye ume kachasị ume na ike maka aka gị.
Ladies atụrụ akpụkpọ anụ gloves nwere bọtịnụ ise na azụ
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ dị nro na nke na-adịte aka Maka ọrụ, mgbede, ma ọ bụ ejiji kwa ụbọchị!
Iesmụ nwanyị na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ na-eji aka aka
Ladies atụrụ akpụkpọ anụ gloves nwere ahịrị 2 nke aka-kpachie azụ
Maka ọrụ, mgbede, ma ọ bụ ịkwa uwe kwa ụbọchị! Mara mma ma mara mma. Uwe a na-eyi ọmarịcha afọ ma ga-anọgide na-ejere gị ozi site n'oge ruo n'oge.
Ladies atụrụ akpụkpọ anụ gloves nwere ahịrị atọ nke aka-kpachie
Casual style, Mere nke rọrọ na inogide ethiopia atụrụ akpụkpọ, na silk lining, Na azụ-acha uwe na atọ e nyere ahịrị kpachie.
Uwe akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nwere akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
Udiri eme, Mere nke adighi nma na adighi nma nke ethiopia akpukpo akpukpo atụrụ, nke nwere nkpuru ahihia nke silk, Na azu nke ejiri akwa akpukpo aru kpuchie, Mee ka aka gi di nma.
Ladies atụrụ akpụkpọ anụ gloves na zipa na azụ
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ dị nro na nke na-adịgide adịgide, nke nwere ego cashmere, Na azụ nke ejiri akwa zipa, Mpekere abụọ nke ahịhịa willow, mara ihe ma mara mma. nye obi uto otutu oge site na ukporo na ejiji!
Iesmụ nwanyị na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ nwere mkpịsị ụkwụ
Kpochapụwo ụdị, Mere nke adụ na inogide ethiopia atụrụ akpụkpọ anụ, na cashmere lining, Na azụ yi uwe na wavy stitches, Ọ dị ka mfe ma na-atọ ụtọ. Na-enye ezigbo obi ụtọ maka ọtụtụ oge site na oge iji ejiji!